Behind the Scen - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
N'azụ Mpaghara nkezi 4.1 / 5 si 16
NA / A, o nwere ihe nlere 68.8K
Adult, Adventure, Drama, fantasy, Manhwa, tozuru okè, Otu gbara, romance, Weebụ, Yaoi
Korea si hunkiest n'elu nlereanya Woo Taeyoung ekpebie na-agbalị ya aka na-eme otu ugboro ọzọ na Behind the Scenes Manga. Onweghi oru ndi ozo nke ndi ntorobia, Taeyoung lekwasiri anya ike ya.
Mgbe ọ chọtara arụsị ya, onye nrọ ya bụ Koo Min-ki, ga-abụ otu n’ime ndị na-eme ihe nkiri a, ọ kpebisikwara ike na ọ ga-arụ ọrụ dịka onye ga-eso na ya.
Ha abụọ yiri ka ha nwere kemịkalụ kemịkalụ na ibe ha… ma na ihuenyo. Nke a ọ ga - enyere ha aka? Ma ọ bụ ọ ga - eme ka ụwa ha daa na mberede?
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ yaou
Isi nke 96 Ọgwụgwụ Nwere ike 2, 2021
Chapter 95 Nwere ike 2, 2021
Chapter 94 Nwere ike 2, 2021
Chapter 93 Nwere ike 2, 2021
Chapter 92 Nwere ike 2, 2021
Chapter 91 Nwere ike 2, 2021
Chapter 90 Nwere ike 2, 2021
Chapter 89 Nwere ike 2, 2021
Chapter 88 Nwere ike 2, 2021
Chapter 87 Nwere ike 2, 2021
Chapter 86 Nwere ike 2, 2021
Chapter 85 Nwere ike 2, 2021
Chapter 84 Nwere ike 2, 2021
Chapter 83 Nwere ike 2, 2021
Chapter 82 Nwere ike 2, 2021
Chapter 81 Nwere ike 2, 2021
Chapter 80 Nwere ike 2, 2021
Chapter 79 Nwere ike 2, 2021
Chapter 78 Nwere ike 2, 2021
Chapter 77 Nwere ike 2, 2021
Chapter 76 Nwere ike 2, 2021
Chapter 75 Nwere ike 2, 2021
Chapter 74 Nwere ike 2, 2021
Chapter 73 Nwere ike 2, 2021
Chapter 72 Nwere ike 2, 2021
Chapter 71 Nwere ike 2, 2021
To Aru Majutsu No Index X Iji Aru Kagaku No Railgun 4Koma Anthology